यी बैंकमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण ! | Sawal Nepal |The Power of Information
यी बैंकमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण !
पत्रपत्रिका २०७६ श्रावण २९, बुधबार १४:४७ मा प्रकासित
गत आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) बैङ्कको लागि कस्तो रह्यो र वित्तीय सूचकाङ्कको अवस्थामा के–के सुधार भए भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चौमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन ।बैङ्कहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा हामीले कुन बैङ्कले सस्तोमा ऋण दिएलान् भनेर केलाउन खोजेका छौँ ।
ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुने मुख्य आधार भनेको बेस रेट (आधार दर) हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको न्युनतम ब्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने संकेत आधारदर हो । राष्ट्र बैङ्कको नियम अनुसार राख्नुपर्ने तरलता, निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज, बैङ्कका कर्मचारीको तलब भत्ता, बैङ्क सञ्चालनका लागि लाग्ने घरभाडा लगायतका खर्च धान्ने गरी बैङ्कहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । सो ब्याज कतिसम्म भयो भने बैङ्कलाई घाटा हुदैन भनेर निकालिने हिसाब आधारदरको गणना विधि हो ।
असार मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अहिले सबैभन्दा सस्तो ऋण पाइने बैङ्कमा स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैङ्क र नेपाल बैङ्क देखिएका छन् । किनभने उनीहरुको आधारदर सबैभन्दा कम छ । यस्तै नबिल बैङ्क, एभरेष्ट बैङ्क, मेगा, सानिमाबाट पनि अन्य बैङ्कको तुलनामा कम ब्याजमा ऋण पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टडको आधारदर ७.६३ प्रतिशत छ भने नेपाल बैङ्कको ७.९८ प्रतिशत छ । अन्य बैङ्कहरुको भने आधारदर बढी छ । हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैङ्क अस्तित्वमा छन् । त्यसमा १८ वटा वाणिज्य बैङ्कले प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेका छन् । यसमा प्रायः बैङ्कले नाफा कमाएको वित्तीय विवरण दिएका छन् ।
सबैभन्दा कम खराब कर्जा सानिमा, स्ट्याण्डर्ड र एभरेष्टको
अधिकांश बैङ्कको खराब कर्जा न्युन छ । बैङ्कले निश्चित समयका लागि भनेर दिएको ऋण तोकिएको समयमा उठेन भने त्यसलाई नन पर्फमिङ लोन (एनपिएल) अर्थात खराब कर्जा भनिन्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएको बैङ्कलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । खराब कर्जाका हिसाबले नेपाली बैङ्कहरु जोखिम मुक्त छन् भन्ने उनीहरुको एनपिएलले देखाउँछ । सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैङ्क, नेपाल बैङ्क, एनसीसी बैङ्कको खराब कर्जा छ । कृषि विकासको २.९०, नेपाल बैङ्क २.५८ र एनसीसी बैङ्कको २.७८ प्रतिशत छ ।
स्रोत : सम्बन्धित बैङ्कले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा आधारित
कोरोना कोषमा प्रभु बैंकको १ करोड १ लाख
लकडाउन अहिले, राहत कहिले ? यस्तो छ कार्ययोजनाको व्यवस्था
फेरी घट्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो ?
दमकमा कोरोना रोकथाम तथा राहत कोषमा ७ लाख ५८ हजार , के के भयो निर्णय ?
शिक्षण शुल्क छुट गर्न सुझाव
दमकका सित्तैमा तरकारी !
हेर्नुहोस बि.सं. २०७६ चैत २१,शुक्रवार २०२० अप्रिल ३को राशिफल, कुन राशिलाइ कस्तो प्रभाव
कोरोना सारिदिएको भन्दै नर्सले गरे चिकित्सक प्रेमिकाको हत्या
ग्लोबल एजुकेसनल एकेडेमीले गर्यो दमक नगरपालिको कोरोना रोकथाम कोषमा सहयोग साथै आफ्ना विद्यार्थीका परिवारलाई राहत सहयोग
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय: यस्ता छन् अरु निर्णय
चिनमा यस्ता कुराको मासु खाना प्रतिबन्ध
दमकमा लकडाउन भएको बेला कुद्ने ९३ सवारी साधन नियण्त्रणमा, बाहिर ननिस्कन डिएसपी विजय पण्डितको आग्रह
हेर्नुहोस तपाईको यो साता चैत २३ देखि २९ सम्मको राशिफल
सङ्क्रमित बोक्न हिँडेको एम्बुलेन्सको चालक हराएपछि…
इसेवाले निकाल्यो यस्तो प्रेस विज्ञप्ति
सास फेर्दा र कुरा गर्दा पनि कोरोनाभाइरस सर्ने अमेरिकी विज्ञहरूको चेतावनी
दमक ४ मा कांग्रेसले बाड्यो चामल राहत
एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा, हेर्नुहोस के के रहेछ